tricot jira Fekitori | China tricot jira Vagadziri, Vatengesi
Nylon tricot jira remuchadenga yoga swing hammock
Tsanangudzo Iyi nylon tricot jira, yedu yechinyorwa nhamba FTT20620, inogadzirwa ne100% 40 denier nylon yakajeka shinda. Iyo ine imwe michina yakatambanudzwa muhupamhi asi haina kutambanudza pakureba. Yedu 108-inch-yakafara inopenya nylon tricot jira inonzi silk hammock kana iyo yoga swing machira. Iyo yakanakisa machira machira eiri yemuchadenga yoga inonziwo anti-giravhiti yoga. Iyi nylon tricot jira rakasimba uye rakasimba zvakakwana kutakura isu ...
Nylon spandex inononoka ina nzira yakatambanudza tricot jira rekushambira
Tsananguro Iyi isina kujeka nylon spandex yakatambanudza tricot jira, yedu chinyorwa nhamba FTTG101001, inogadzirwa kubva ku80% 40 yekuramba isina kujeka shinda uye 20% spandex 40 denier. Iyo jira inoratidzira isina kujeka sheeny kutaridzika. Iyo ina-nzira yakatwasuka, inotsvedza uye yakasimba diki tricot jira. Iyi nylon (polyamide) spandex (elastane) yakatwasuka jira ine simba kupora. Inodzokera kumashure kune yayo yekutanga chimiro uye inopa kumwe kuramba. Nekuda kweiyo knitt ...
Nylon spandex inopenya ina nzira yakatambanudza tricot jira
Tsananguro Iyi inopenya nylon spandex yakatambanudza tricot jira, yedu chinyorwa nhamba FTTG10103, inogadzirwa kubva ku81% 40 denier inopenya shinda uye 19% spandex 40 denier. Iyo jira inoratidzira kupenya kwesheeny kutaridzika. Iyo ina-nzira yakatwasuka, inotsvedza uye yakasimba diki tricot jira. Iyi nylon (polyamide) spandex (elastane) yakatwasuka jira ine simba kupora. Inodzokera kumashure kune yayo yekutanga chimiro uye inopa kumwe kuramba. Nekuda kwayo ...
Nylon spandex matte ina nzira yakatambanudza tricot jira
Tsananguro Iyo nylon spandex yakatambanudza tricot jira, yedu yechinyorwa nhamba FTTG101021, inogadzirwa kubva ku82% nylon semi-isinganzwisisike 40 denier uye 18% spandex 40 denier. Mucheka unoratidzira kupenya (matte). Iyo ina-nzira yakatwasuka uye yakasimba diki tricot jira. Iyi nylon (polyamide) spandex (elastane) yakatwasuka machira inopokana uye inobvumira jira kuti rirambe rakamira. Nekuda kwekuruka kwayo uye chimiro chakarukwa, nylon s ...